ukuphila Adult - akulula. Udinga ukubhekana izintela, nokukhokhwa izikweletu ngoba ifulethi kanye zaziziningi neminye imininingwane. Ngokwesibonelo, umshini wokuwasha nayo idinga ukunakekelwa. Uma ungeyena Cabangisisa kakhulu ukwenza ilondolo, ungakwazi anganciphisa isikhathi sokuphila kwezinto idivayisi. Ukuze ukugeza ngaphandle imali eningi kanye nesikhathi. Kungcono ukuzama ukuba inqubo ngempumelelo isikhathi eside. Sebenzisa iseluleko ochwepheshe, kuleso simo uzobe qiniseka ukuthi ungaluthola umngenisi wezihambi ezinhle!
Musa overload umshini
Iningi ezivamile umshini wokuwasha yakhelwe kwansuku ukugeza izinto. Uma uzama ukubeka e isigubhu ingubo enkulu, ungakwazi ukugqashula phansi amasu. Too esindayo nelineni ngiyajabula indlela. Ungazami ukugeza okhaphethi nezokulala ngisho noma usayizi basuke ibekwe injini kuzodala umthwalo ngokweqile, okungaholela umonakalo. izinto ezinkulu kufanele wageza ezimotweni ekhethekile kwezohwebo, ukuthi kungcono ukuba ziyise ilondolo.
Gcina umnyango ovulekile
Ngemuva kokuthi ususe into umshini wokuwasha, cishe uvale umnyango bese uya zonke hang out. Kufanele bazi ukuthi idivayisi wet ngaphakathi. Uma ungenalo unike amanzi ukuhwamuka, kwakheka isikhunta is. Shiya umnyango ovulekile lapho uyisebenzisa umshini, bese siyishiya manzi ngokwenzenjalo uyogwema ukubukeka i nephunga ezingemnandi nezingozi zesikhunta. Ngaphezu kwalokho, kufanele nizame izona ambalwa isetshenziswa ngesikhathi esifanayo ne-ejenti powder descaling, ikakhulukazi uma amanzi lakho lendawo kanzima. Ngakho ukuvikela imoto yakho kusukela ekwakhekeni koqweqwe sigubhu.
Hlanza izinto hhayi kuphela
Uma umshini wakho egeza engahlanzekile, kungaba iphume izinto? Kubalulekile ukuze ahlole ngokucophelela sigubhu basihlikihle it ukuba izambatho zakho awavelanga noma imaphi amabala. Njalo ngeviki, Sula ngaphakathi kwe-umshini ngendwangu emanzi. Lokhu kuzokwenza balahle iminonjana insipho, ukungcola, amafutha, ukususa lezo zinsalela okunamathelayo. Ungase futhi ugijime umshini uviniga noma kalamula ukususa amafutha. Ungasebenzisa ekhethekile yokuhlanza ejenti yemishini ukusebenzisa lokunyenti kwako kanye ngenyanga.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukusula imigqomo umshini wokuwasha hhayi kuphela. Kwemoya ungathola kwezinye izingxenye idivayisi, ukuze ukuze kubuyiselwe ukuthula ngokucophelela. Hlanza umnyango, ukukhokha ukunakekela okukhethekile gaskets iraba ku emaphethelweni. Cleanser, izinwele, ukungcola angase buthelela khona. Uma ukuqapha isimo umnyango, uyobe ukuqinisekisa ngokwakho kuhlanzeke futhi kube kusha. Glass kufanele ahlanze, futhi, ngaphandle kwalokho liyombozwa nge touch of dirty laundry. Kumele kukhanye!
Sebenzisa imodi lesifanele
Ngo umshini wokuwasha has a sebuningini izindlela, futhi musa nje ufuna lokho. Uma njalo nje sebenzisa imodi esifanayo, une isikhathi ukushintsha indlela yabo, uma kungenjalo ezingonakalisa izinto zakho. Ingabe angeyengwe baphonse elondolo konke ngesikhathi esisodwa uyegeza lokushisa esiphezulu ukuze ngokushesha ukuqedela lo msebenzi. Kumzwisa ubuhlungu, futhi emotweni nasezimpahleni zokugqoka. Geza izinto obucayi ngokwehlukile ingcole kakhulu, uma ufuna ukuthola umphumela omuhle. Futhi, hlola imiyalo amalebula.
Musa slam umnyango
Slams umnyango yimbi ngaso sonke isikhathi, futhi kumayelana umshini wokuwasha. imishini yakho kungenziwa iphazamiseke uma aphathe ke zokuphola. Ukuze sigweme ukuba ukuthenga indlela entsha ukuze umnyango uyiphatha ngokucophelela ngangokunokwenzeka.
Akubalulekile ukugcwalisa umshini wokuwasha uvalwe. Uma unezingane ezincane, ungase uthole ukuthi wena njalo lisuswe, kodwa awukwazi kusheshiswe umsebenzi. Uma overfill imoto, izinto Awukwazi ukuhambisa ngesikhathi umjikelezo ukugeza futhi ngenxa yalokho ungabi ahlanzekile anele. Ngaphezu kwalokho, i-ejenti yokuhlanza akuyona basakaza ngokulinganayo. On ezinye izinto ungahlala izindawo. Zama neze sedlule umthwalo ivolumu.
Enye iqhinga elula ukuthi uzokusiza uthole esiphezulu aphume umshini wokuwasha, - namanzi ukulawula izinga. Lokhu kusebenza onobuhle lapho ungakhetha Usayizi thwebula. Hlala njalo ukhetha Kulungile, ngakho njengoba ngeke esachitha amanzi ngokweqile. amanzi okweqile kwenza izinto kahle.
Ungayisebenzisi powder kakhulu
Linganisa powder hhayi iso ukusebenza ngokucophelela ngokuvumelana nenani izinto usabonakala. Njalo zama ukukhumbula ukuthi. Uma usebenzisa kakhulu, nempahla yakho, i-motor umshini wokuwasha kanye amapayipi akho angase aphazamiseke. Ngaphezu kwalokho, izinto nje ahlale powder ezingcolile uyobenza grey futhi zomile.
Okokuqala ukubhekana amabala
Elinye isu elula: khumbula ukuthi umshini wokuwasha - akusiwona kudivayisi imilingo. Awukwazi baphonse newayini elibomvu ku ijezi elimhlophe futhi balindele ukuthi imoto is wageza off. Lezi izindawo kumele ziphathwe ngisho nangaphambi egeza. Uma une into ibala, ungazami ukubhekana ibala ngokushesha ngangokunokwenzeka. Uma bome, ukungcola ungahlala kuze kube phakade nomshini wokuwasha ngeke kusize. Cwilisa izinto ibala ku yokuwasha bese ugeza.
Qiniseka ukukhumbula lemifanekiso e umshini wokuwasha. Uma une-ke, kudingeka ukuhlanza njalo ukuvimbela iphunga nokuqinisekisa ukunyakaza evamile yamanzi ngaphakathi.
Yakha icebo yokuhlanza
Ubumsulwa ukuwasha machine nomthelela ekuphileni zenkonzo yalo. Zama ukudala isimiso ngokwakho ukukhumbula zonke kunesidingo. Imvamisa yokuhlanza kuzoncika ekutheni une imoto. Uma une mshini umthwalo mpo, kwanele ukuqala ngamanzi ashisayo futhi uviniga. ukulayisha ovundlile kudinga ukunakekelwa okwengeziwe. Udinga ukusebenzisa omkhulu yokuhlanza ejenti kanye nokuqapha isimo umnyango.
Engeza uviniga ukuze izinto
Njalo ukukhathazeka ukugeza izinto ezintsha, njengoba ungase ulahlekelwe umbala wabo. Ihlala ecasulayo phawula indlela omkhulu omnyama ijezi kuba egqwalile emva ukugeza kuqala. Ukuze uthole okuhle kwe-umshini wokuwasha, zama cwilisa izinto uviniga ngaphambi egeza. Lokhu kusiza ukuba ugweme ukulahlekelwa umbala, ngaphandle, izinto ziba ethambile.
zisebenzisa baking soda
Ukuqinisekisa izinto ukuhogela fresh, zama ukwengeza baking soda ukugeza. Cwilisa izingubo baking soda isixazululo amanzi, bese ugeza njengenjwayelo. Phakathi hashaza, engeza isigamu inkomishi uviniga. Ngenxa yalokho, ukuqeda iphunga ezingemnandi.
Zama zokuhlanza ezahlukene
Kubalulekile ukusebenzisa kangcono imoto yakho isala ihlanzeke. Powder kahle izindlela ketshezi, ngaphezu kwalokho, ngokuvamile eshibhile. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-powder is uye wakwenza ahlanze Indwangu kusuka ukungcola. Nokho, ungathola futhi izindlela ketshezi, pick omunye evumelana nawe.
Ngemva kokugeza kumele inqanyuliwe ipayipi feeds amanzi emshinini wakho. Uma tube ayikuvumeli ukuvala amanzi, kufanele esikhundleni salo. Sebenzisa izinga okuhle kanye ipayipi okuqinile, ukuze ugweme ukuvuza. Kungcono ukuba esikhundleni sako esisodwa kunanini ukuthenga entsha ngoba Ukuvutha ubudala bese.
Nekungenzeka ube nokuzaza ngitjho dryer, qiniseka ukusebenzisa ezinye imithetho ngenhla, futhi ngaye, isibonelo, mayelana okuqukethwe idivayisi yakho ihlanzekile. Hlola isimo ingaphakathi dryer bese usebenzisa imodi efanele. Kuphela kuleli cala, imishini yakho eyokusiza eside futhi sizosebenza ngempela kahle.
Heater kagesi: izinhlobo, incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Imbobo emoyeni heater: ngebuhle nebubi
Soffits Metal: izinhlobo, ngebuhle nebubi
Izindlela Zanamuhla e Biology
Galimdzhana Ibragimov - Tatar nesazi sezilimi: Biography, ucwaningo nokufundisa
Moscow-Moore. Yokuya edolobheni lasendulo ezingcwele Moore
Isikhundla geopolitical Russia
Icelandic: izici nezithombe